Ho an’ny Dren Bongolava, nahatratra 5 081 ireo niatrika
fanadinana BEPC .
Misy 14 ireo ivontoeram-panadinana ary ahitana efitrano 222.
Mipetraka hatrany ny lamina ara-pahasalamana ka tsy mihoatra ny
isaky ny efitranom-panadinana 25 ny mpiadina ary ahitana fanasana
tanana avokoa ny foibem-panadinana rehetra. 11 taona ny zandriny
indrindra ary 46 taona kosa ny zokiny indrindra amin’ireo
Mila fahazoan-dalana avy amin’ny ben’ny
Tanàna ny fivarotana hani-masaka anatin’ny
fiara, aorian’ny fankatoavan’ny fitaleavana miandraikitra
ny fahasalamam-bahoaka eo anivon’ny kaominina Antananarivo
Renivohitra. Tsy maintsy manatanteraka ireo adidy voasoratra ao
anaty bokin’andraikitra izay nahazo alalana. Io bokin’andraikitra
io no mametra ireo sokajin-tsakafo na entam-barotra azon’ireo fiara
mpivarotra hani-masaka amidy…
Ny zoma misandratr’andro teo no nanao fihaniana teo anivon’ny mpitsara ny fitsarana ambony teto Toamasina, ireo vadintany 11 mirahalahy vao afa-panadinana ny volana novambra ny taona lasa. Tamin’ny naha-tsy teto ann-toerana ny tonia mpampanoa lalana ambony sy ny filoha voalohany ny fitsarana ambony, dia ny “substitute general” sy ny mpitsara eo anivon’ny “chambre” teo anivon’ny fitsarana ambony no nandray ny fihanianan’izy ireo. Ny iray ny Me Mandimby Harisandratra araka ny didimpitondrana navoakan’ny :minisitry ny fitsarana laharana 8686/2019 ny 21 aprily teo, no avy hatrany dia mandray ny asany ao Soanierana Ivongo eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Fenerivo atsinanana. Ireo 10 lahy ambony kosa araka ny didimpitondrana laharana 8687/2019 ny 25 aprily 2019, dia mbola manao fanazaran’asa eo anivon’ireo vadintany matihanina eto Toamasina mandritra ny roa taona, vao mandray ny asany amin’ireo fari-piadidian’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Fenerivo atsinanana, Maroantsetra, Toamasina I, ary Vatomandry indray. Nandritra ny fandraisana ny fihanihan’ireto vadintany vaovao ireto no nilazan’ny mpitsara teto Toamasina, fa isan’ny mahatonga ny fisian’ny tany tan-dalana ny asan’ireo vadintany amin’ny izy ireo mpanantontosa ny didim-pitsarana mivoaka eny amin’ny fiaraha-monina. Ny fitoraham-bato sy fanopana ary ny fanidina varavarana azy ireny dia midika fanoheram-panjakana sy ny fitsarana ary fikomiana. Nomarihan’ireo mpitsarana sy ireo vadintany fa tsy miady amin’ny vahoaka, na mpiady eny amin’ny fitsarana ny vadintany amina raharaham-pitsarana, fa mpanatanteraka izay didy mivoaka no asany ho fanajana ny tany tan-dalana eto amintsika. Malala DidierL’article Holafitry ny vadintany malagasy : Miampy 11 ireo vandintany miasa eto Toamasina a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fokontany dimy: nodiovina ireo lakandrano madinika
Nodiovina ireo lakandrano madinika eny anivon’ireo fokontany dimy ao anivon’ny boriborintany voalohany amin’ny faritra iva eto an-dRenivohitra. Antohomadinika Afovoany, III G Hangar, Andavamamba Anjezika I-II sy Andohotapenaka I ny iantefan’ny asa izay mbola nitohy. Tsapa fa mbola manary ny fakony sy ny malotony any anaty lakandrano ireo mponina eny amin’ireo faritra iva ka izay indrindra ny anton’izao hetsika manerana ny boriborintany enina izao hanentanana sy hanairana ny sain’ireo mponina. “Loza mitatao ho azy ireo ny fako rehefa tonga indray ny fahavaratra”, hoy ny nambaran’ny tompon’andraikitra iray avy eo anivon’ny boriborintany Voalohany, Rakotonirina Maminiaina. Efa misy ihany ireo efa voaentana amin’ny fanaovana hetsika fanadiovana ka mandray andraikitra avy hatrany rehefa misy maloto ny manodidina azy. Mbola eo ihany ireo mbola tsy mahatsapa tena.Vonjy L’article Fokontany dimy: nodiovina ireo lakandrano madinika a été récupéré chez Newsmada.
Lanonana eny Mahamasina :: Miaramila maorisianina, renioney kaomôrianina hanao matso
Hampiavaka ny matso lehibe hatao amin’ny tolakandron’ny 26 jona 2019, etsy amin’ny kianjaben’i Maha­masina, ny fandraisana anjaran’ireo miaramila vahiny avy amin’ny Tafika avy atsy La Réunion sy Kaomôro ary Maorisy. Roapolo mahery no isan’izy ireo ho avy eto amin’izao fankalazana ny tsingerin-taona niverenan’ ny Fahaleovantena sy ny fetin’ny Foloalindahy izao. Fantatra fa hampiseho ny traikefany amin’ny fomba fiady izy ireo. Hamoaka ireo fitaovam-piadiana ananany kosa ny Tafika malagasy. Anisan’ny andrasana ny fahatongavan’i Paul Kagame, Filoham-pirenen’i Rwanda, izay vahinin’ny Filoha malagasy manokana. Ho mafy ny fitandroana ny fandriampahalemana, tsy eny Mahamasina ihany fa any amin’ireo toerana rehetra hisy fivorivorian’ olona. Nicoh Richman L’article Lanonana eny Mahamasina :: Miaramila maorisianina, renioney kaomôrianina hanao matso est apparu en premier sur AoRaha.